Idumileyo nayo iyajuluka | Amadoda aQinisekileyo
Ubuso obusaziwa njengoChris Martin, uKevin Bacon, u-Antonio Banderas, uTom Cruise okanye uJavier Bardem, ngaxa lithile ebomini babo babeneengxaki zokubila. Bayaziwa, ukubonwa, uxinzelelo kunye noxinzelelo lokuhamba ngokugqibeleleyo ngamanye amaxesha kudlala iqhinga kubo.
Njengokuba ubona ukubila yingxaki yomntu wonke, abantu abadumileyo okanye abantu abaqhelekileyo njengathi sonke, kwaye ayibangelwa kukuswela ucoceko kuphela, kodwa ingafikelela kuthi ngokwe ukubila okugqithisileyo, okanye ikwabizwa ngokuba yihyperhidrosis, kodwa zonke ezi zinto zinokunyangwa ngaphandle kwengxaki.
Kule veki bendizimase umboniso we Iperspirex, Imveliso ejongene ngqo naleyo, ukubila ayisiyo ntloni kuthi kwaye oku kuba yingxaki. Ayisiyiyo nje into yokubila, yimveliso yoyilo leyo kunciphisa ukubila nge-65%, ukusebenza ukusuka kwiintsuku ezintathu ukuya kwezi-3.
Ukunciphisa ukubila kwi-zero kulula kakhulu. Unetyala kuphela Faka iPerspirex kwindawo oza kunyangwa kuyo ngaphambi kokuba ulale, enesikhumba esicocekileyo nesomileyo. Xa uvuka, ngosuku olulandelayo hlamba indawo kwaye ususe intsalela yemveliso. Kulula ngokuchanekileyo? I-Perspirex isebenza kwindawo ofuna ukuyinyanga ngenxa yesiseko sayo se-aluminium chloride kunye nesisombululo se-lactate esenza ukuba ingene kwi-sweat gland ukuthintela umsebenzi wayo. Isiphumo siyanyamalala emva kweentsuku ezimbalwa xa imveliso isuswe ngenkqubo yendalo yokuhlaziya ulusu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Abantu abadumileyo bayabila nabo
"... ukubila yingxaki echaphazela wonke umntu, abantu abadumileyo okanye abantu abaqhelekileyo njengathi sonke, kwaye ayibangelwa zimpilo kuphela ..."
Ukubila kubangelwa kukucoceka kwezempilo?
Uxolo, asithethi ukuba esinye sezizathu zokubila kunokuba kukucoceka okungalunganga. Konke okugqibelele!!
Ndizamile kwaye iyasebenza ngokwenene, ayikuko ukuba ndibile kakhulu. Kude kube ngoku ndisebenzise iVichy deodorant, kwaye kwakungalunganga, kodwa ngoku ngehlobo ndandiziva ngathi ndiya phambili.
Le indibuyisele umva ngokungasisebenzisi deodorant yonke imihla emva kokuhlamba, kodwa iyayitshintsha i-chip kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba awuqapheli naliphi na ivumba, ngaphandle kwempahla oyinxibileyo, ndiyibeka kuyo yonke imihla emithathu kwaye nditsho nelokugqibela ndiqaphele ivumba lombilo, lokuba ndiya ejimini yonke imihla ndibile, ndiye echibini ... kodwa ivumba alibonakali
Iingcebiso zokunxiba imbonakalo emhlophe iyonke